Jikwaa Cubito na anụ ụlọ ya na Mundo Cubiaventuras | Gam akporosis
Cubiaventuras World bụ egwuregwu arcade ọhụụ na-agba nke anyị ji agba Cubito ọsọ na Cubimascota ya site na sekit na echiche nke isometric nke anyị ga-awụli elu, tụgharịa, mee combos na ọtụtụ ndị ọzọ.
Eziokwu bu na o bu egwuregwu nke dabara n'ịhụnanya site na nke mbụ na ọmarịcha menus, na-adọrọ adọrọ music, ọmarịcha odide, na-ekere òkè egwuregwu arụzi, na ọtụtụ; na ọ bụ ezie na na mbụ ọ dị ka ọ nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ dị mfe. Ọbụghị ncha ncha. Gaa maka ya.
1 Cubes na Cubimascota ha
2 Dodge ọnyà ndị na-egbu egbu na Cubiaventuras World
3 Hapụ dị ka obere mkpuru
Cubes na Cubimascota ha
MITo Cubiaventuras ebipụtala site UNIT5 dị ka egwuregwu ịgba ọsọ nke anyị na-anya Cubito na ndị enyi ya site a 3D circuit yiri Minecraft, nke anyị nwere pịa ihuenyo oge ọ bụla anyị enchanted protagonist gafere a directional akụ.
Ka anyị na-eme ya n'oge ahụ, anyị ga-enwe ike ịgbalite ọtụtụ igbe iji nweta combos ma si otú ahụ nweta isi ihe ndị ọzọ. Mana ọ bụghị ihe niile na-anọgide na ndu mgbanwe, mana ka anyị na-agafe ọkwa anyị ga-amụta ịwụli elu na mgbochi dị iche iche anyị ga-ahụ n'ụzọ anyị.
Nke a bụ otu egwuregwu egwuregwu nke arcade a na-akpọ Cubiaventuras World si adọta na site na oge mbụ na-ewe anyị sekit ọ bụla adịghị mkpụmkpụ, na na ka anyị na-aga n’ihu anyị ga-achọpụta na oge ọ bụla ha siri ike karị. Karịsịa maka ọdịda, ma ọ bụ oge ahụ dị iche iche ebe anyị na-eleghara onye protagonist anyị anya.
Dodge ọnyà ndị na-egbu egbu na Cubiaventuras World
Ọkwa nwere ihe ha nwere, ị ga-enwerịrị mechaa ha n'otu oge iji nwee ike kpughee kpakpando 3 ahụ iji mezue ha. Dị ka anyị ga-akpọghe ihe odide ọhụrụ nwere ikike dị iche iche ga-eme ka anyị nwekwuo ọ enjoyụ karịa nnukwu egwuregwu a nke UNIT5 kwalitere.
Anyị nwekwara a ahụrụ na so anyị na na oge ụfọdụ ọ ga-enwe ọrụ ya. Na n'ezie, ikike ndị a pụrụ iche na-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, ịgbatị nha anyị Cube ka ọ nwee ike iwepu ihe ọ chọtara n'ụzọ ya.
Finalmente anyị ga-eche ihu ikpeazụ bosses ebe combos na imata otu esi apia ihe n’oge kwesiri ya bu ihe di iche n’etiti mmeri ma obu otiti. Ihe a niile na ọnọdụ mkpọsa, ebe ọ bụ na anyị nwekwara ike ịnweta ọnọdụ ọgba aghara ka ọ ghara inwe oge na ntụrụndụ na-eto n'ike n'ike.
Hapụ dị ka obere mkpuru
Anyị enweghị ike ịkwụsị ịkụ aka ebe studio na-ahụ maka ịhapụ obere mkpuru egwu a maka gam akporo. Ma nke ahụ bụ na Mundo Cubiaventuras jupụtara anwansi na ike ahụ sitere na nke mbụ na-ejide gị n'olu ka ị ghara ịkwụsị ịkpọ ya. A na-ahazi ihe niile ka anyị wee nwee mmetụta nke igwu egwu n'otu n'ime egwuregwu ndị ahụ anyị achọghị ịkwụsị igwu egwu.
Na anyị na-ekwu ya n'ihi nke ọma-e na enyi na enyi odide, na Minecraft-dị ka 3D gburugburu ebe obibi na nkọwa ya na ihe odide ndị ọzọ, ikike anyị ga-eji, nsonaazụ ụda, mmetụta ndị ahụ na-agbanye ihuenyo ka ọ bụrụ egwuregwu aghụghọ niile, yana egwu na-adọrọ adọrọ nke na-adọta gị na menus; menu nke bu mmalite nke obere mkpuru ị ga - achọ ịchọpụta.
Mundo Cubiaventuras bu ezigbo ihe ijuanya anyị na-agba gị ume ka ị nwaa ya iji nwee ọmarịcha ọla maka ekwentị mkpanaaka gị. Naanị ihe na-efu bụ ka anyị nwee ike mepụta sekit ahụ ka anyị wee nwee ike ịkekọrịta ha, mana ugbu a, ka anyị nwee olileanya na na nkeji nke abụọ ma ọ bụ na mgbasa, ha ga-eju anyị anya ọzọ. Anyị na-ahapụ gị ya na Space Army Jetpack Adventure iji mee ka nnọkọ ahụ na-aga.
Ọ na-emebi ihe egwuregwu na egwuregwu dị n'akụkụ niile iji wee intoụbiga mmanya ókè n'ụzọ dị ukwuu nke ịghọta egwuregwu ịgba ọsọ.
Arcade di nma nke ndi di nma
Izu zuru oke nke imeputa gburugburu, ihe omuma, ihe omuma ...
Mmetụta ụda ya zuru oke maka cajoling
Egwú egwu na-adịghị ahapụ gị
Ndị sekit ahụ anaghị adị mkpụmkpụ ma ọ dị mma
Enweghị a larịị imewe mode ịkọrọ ha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Cubiaventuras World bụ nnukwu arcade racing egwuregwu ị ga-ahụ n'anya